Computer Technical Notes & Sharing Softwares: October 2011
command prompt ကနေ drive တွေဖျောက်ကြည့်မယ်
Software for Hackers (ဟက်ကာများအတွက် သီးသန့်)
flash banner title ထည့်ခြင်း
ကွန် ပြူ တာကို automatic timer နဲ့ဖွင့်ရန် နည်းလမ်...
Folder Background ပြောင်းနည်း
ဇော်မင်းအောင် ကိုယ်မကြည်.စေချင်တဲ. folder တွေကိုအလ...
VIRUS ဖျက်စီးမူ.ကြောင့် ပျက်ဆီးသွားသော regedit ကို...
RAM (memory) ကို ထပ်မစိုက်ပဲ တိုးချင်ရင်
C ++ Complete ( ဦးအောင်မြင့် )
Posted by SLIP at 1:40 PM0comments
Posted by SLIP at 4:26 PM0comments
нσω тσ Dσωηℓσα∂- Click on the Download link
seconds and then click on
Posted by SLIP at 4:03 PM0comments
အခု ဖော်ပြခဲ့တဲ့အထဲမှာ တစ်ခြားမျိုးကွဲတွေလည်း ရှိကောင်းရှိပါလိမ့်မယ်..core i series processor တစ်လုံးနဲ့တစ်လုံး ဘာကွာလဲလို့မေးလာရင် တစ်ခုတည်းဖြေလို့ မရတော့ပါဘူး ဒါကြောင့်သူ့ မှာပါတဲ့အမျိုးအစား..အထဲမှာ လုပ်ဆောင်နိုင်တဲ့စွမ်းရည် ပါဝင်မှုတွေကို အထက်တွင်ဖော်ပြ ဆွေးနွေးခဲ့ပြီြး ဖစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ..Architecture တစ်ခုတည်းအောက်မှာ ပင်လျင် code name တွေခွဲပြီးတော့ ထုတ်ထားတာ ကိုတွေ့မြင်ခဲ့ရပြီး ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်..ညီအစ်ကို မောင်နှများအားလုံး knowledge ရကြပါစေခင်ဗျာ..
Posted by SLIP at 5:27 AM0comments
1)သင့် CD Drive ကိုဆက်တိုက်ပွင့်နေပါလိမ့်မယ်။ဖွင့်လိုက်ပိတ်လိုက်ပေါ့။
ဒီဟာလေးကို ( .vbs) နဲ့ဆေ့ပါ
2) Caps Lock ကိုဆက်တိုက်ဖွင့်လိုက်ပိတ်လိုက်လုပ်နေပါလိမ့်မယ်။
3) ဒါလေးကသင့်ကွန်ပြူတာကို မက်ဆေ့ ပေးပြီး shutdown ကျသွားစေပါတယ်။
ဒီဟာလေးကို ( .bat) နဲ့ဆေ့ပါ
4) Enter key ကိုဆက်တိုက်နှိပ်နေမှာပါ။
ဒီဟာလေးကို ( .vbs) နဲ့ဆေ့ပါ.
5) CMD နဲ့ Notepad တွေရပ်မရအောင်ဆက်တိုက်ဖွင့်တာလေးပါ။ဒါလေးကနဲနဲလေးဆိုးတယ်။
ဒီဟာလေးကို ( .bat) နဲ့ဆေ့ပါ..
6) Backspace တိုက်ပွင့်နေမှာပါ။သင်စာရိုက်လို့မရပါ။
7) သင့် keyboard လေးကိုဟက်ပြီး သင်ဟာအရူးဆိုပြီးသင်စာရိုက်တိုင်းပေါ်နေမှာပါ။
8. Notepad ကိုဆက်တိုက်ပွင့်နေမှာပါ။
9) အောက်ကဖြစ်စဉ်တွေကိုလုပ်ပေးမယ့် program လေးပါ။ပေးလာမယ့် မက်ဆေ့တွေကကျွန်တော်ထင် သလိုရှောက်ရေးထားတာပါ။
10) Lighting .bat
သင့် မော်နီတာဟာဘာမှ မမြင်ရပဲ လင်းလက်နေတဲ့ ဖန်သားပြင်ကိုသာမြင်ရမှာပါ။
echo e100 B8 13 00 CD 10 E4 40 88 C3 E4 40 88 C7 F6 E3 30>z.dbg
echo e110 DF 88 C1 BA C8 03 30 C0 EE BA DA 03 EC A8 08 75>>z.dbg
echo e120 FB EC A8 08 74 FB BA C9 03 88 D8 EE 88 F8 EE 88>>z.dbg
echo e130 C8 EE B4 01 CD 16 74 CD B8 03 00 CD 10 C3>>z.dbg
သင်ပြန်ထွက်ချင်ရင် CTRL-ALT-DELETE နဲ့ပြန်ထွက်လိုက်ပါ။
အောက်ကကုတ်ဆိုရင် အဲဒါနဲ့မရပါ။ctrl+shirt+esc နဲံ့ရမယ်။
Posted by SLIP at 2:58 AM0comments
Posted by SLIP at 2:56 AM0comments
Labels: For Folder
edit HTML ထဲဝင်ပြီး ကျွန်တော်ပြထားတဲ့ စာလေးတွေကို ရှာပါ .. ရှာပြီး ပြထားသလိုပဲ လိုက်ပြင်လိုက်ပါ ...
ဒီစာလေးတွေကို တွေ့အောင်ရှာရမှာပါ .. အနီကွင်းပြထားပါတယ်
အစိမ်းရောင် highlight ပြထားတာတွေကိုဖျက်ပြီး showaddelement ကို yes ပြောင်းလိုက်ပါ ပြီးရင် save
ပြီးသွားရင် design tab ထဲကနေ အောက်ပါအတိုင်းလုပ်မယ် ..
အခု box လေးတစ်ခုကျလာမှာပါ .. အဲ့ဒီ box လေးမှာ ကိုယ် banner title လုပ်မယ့် flash file code ကို ထည့်ရမှာပါ .. အဲ့လိုထည့်ဖို့ အတွက် .. flash banner တစ်ခုလုပ်ထားရမှာပေါ့ .. လုပ်ထားပြီးရင် futuresky မှာပဲ blog တစ်ခုရေးမယ်ဆိုပြီး upload လုပ်လိုက်ပါ ..
ပြီးသွားရင် အောက်ပါ code တွေထဲမှာ အစားထိုးလိုက်ပါ ..
အပေါ်မှာ cop link location လုပ်ထားတာကို ဒီနေရာမှာ paste လုပ် " type="application/x-shockwave-flash" height="350" width="1050">
ကျွန်တော့်တင်ထားတဲ့ ဖိုင်နဲ့ပဲလုပ်မယ်ဆိုလည်း အောက်မှာကူးပါ ..
ကူးပြီးတော့ ခုနက blog လုပ်နေတဲ့ နေရာက html ထည့်ခိုင်းတဲ့ box လေးထဲထည့်လိုက်ပါ ... ခုလိုလေး ...
ဒါဆိုရင် ခုလိုလေးဖြစ်လာပါပြီ .. ^_^ နေရာက မမှန်သေးပါဘူး .. header ရွေ့နေပါတယ် ..
ဒါကြောင့် template designer ထဲဝင်ပြီး
adjust width ကို အဆင်ပြေအောင်ပြင်လိုက်ပါခင်ဗျာ .. ဒါဆိုရင် ok ပါပြီ
ကျွန်တော်ကတော့ css နားမလည်လို့ template ပြောင်းပြီး adjust width ကို ပြင်လိုက်တယ် ..
ဒါဆိုရင်တော့ ပြီးပါပြီ ..
Posted by SLIP at 7:35 AM0comments
" Power Management setup" ကနေ " Resume by RTC Alarm" ကိုဝင်ပြီး (Enable) ပြောင်းလိုက်ပါ။
ပြီးရင် " Date ( of month ) Alram" သို့ ရွှေ့ပြီး ( Everyday ) လို့
ပြီးရင် "Time (hh:mm:ss) Alram" သို့ရွှေ့ပြီး မိမိ ထားချင်တဲ့ (hour. minutes,
ထည့်ပေးလိုက်တယ် cmd ကိုဖွင့်ပြီး 'shutdown -s -t XXXX'
Posted by SLIP at 7:32 AM0comments
How to the Change of Folder Background
Posted by SLIP at 7:22 AM0comments
ဇော်မင်းအောင် ကိုယ်မကြည်.စေချင်တဲ. folder တွေကိုအလွယ်တကူဖွင်.လို.မ၇စေဖို. folder security
ကိုယ်မကြည်.စေချင်တဲ. folder တွေကိုဖွင်.လို.မ၇စေဖို. အတွက်ပါ အသုံးပြု၇တာလဲလွယ်ပါတယ် လိုချင်၇င်တော.
အောက်မှာဒေါင်းလိုက်ပါနော် install လုပ်ပြီးတဲ.အခါ အသုံးပြုပုံေ၇ာတခါထဲ ပေါ်လာပါတယ် keygenေ၇ာပါပါတယ်
ိdownload link: :
ziddu | megaupload | zshare| mediafire| ifile.it
folder security 4.1.312
ziddu| megaupload| zshare| mediafire| ifile.it
Posted by SLIP at 6:00 AM0comments
VIRUS ဖျက်စီးမူ.ကြောင့် ပျက်ဆီးသွားသော regedit ကို ပြန်ယူရန်
Flashy ဆိုတဲ.ဗိုင်းရပ် နဲ. သူ.အမျိုးကွဲတွေရဲ.နောက်ဆက်တွဲ ပြဿနာတွေ ကိုရှင်းပေးနိုင်တဲ. removal tool လေးပါ ။ အသုံးများစွာဝင်ပါတယ် ။ ပြီးတော. ကျနော်သိသလောက် သူနဲ.ပက်သက်တဲ. ပာာတွေကို ရှင်းခဲ.ပါတယ် ။
Folder Option ကို ပြန်လည် ဖော်ဖို.ဆိုရင်တော.
"NoFolder Options"="1" ဖြစ်နေရင် ဖျက်ပါ ။
File extension များပျောက် နေတာနဲ. Hidden ဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်တော.
HKEY_CURRENT_USER \_Software \_Microsoft \_Windows \_CurrentVersion \_Policies \_Explorer \_Advanced
"HideFile Ext"="1" နှင့် "Hidden"="2" ဟူသော စာသား များကို ဖျက်ပါ။
တကယ်လို. Computer မှာ regedit ကိုခေါ်လို.မရတော.ဘူးဆိုရင်တော.
[UnhookRegKey] HKLM, Software\_CLASSES\_batfile\_shell\_open\_command,,,"""%1"" %*" HKLM, Software\_CLASSES\_comfile\_shell\_open\_command,,,"""%1"" %*" HKLM, Software\_CLASSES\_exefile\_shell\_open\_command,,,"""%1"" %*" HKLM, Software\_CLASSES\_piffile\_shell\_open\_command,,,"""%1"" %*" HKLM, Software\_CLASSES\_regfile\_shell\_open\_command,,,"regedit.exe ""%1""" HKLM, Software\_CLASSES\_scrfile\_shell\_open\_command,,,"""%1"" %*" HKCU, Software\_Microsoft\_Windows\_CurrentVersion\_Policies\_System,DisableRegistryTools,0x00000020,0
အထက်ပါ တွေကို notepad နဲ.ကူး ပြီး unhook.bat လုပ်ပြီး run လိုက်ပါ ။
regedit ကိုပြန်ခေါ်လို.ရပါလိမ်.မယ် ။
Posted by SLIP at 7:29 AM0comments
Labels: System, Virus
My Computer ကို R-Click လုပ်ပြီး properties ကိုသွားပါတယ်။ ပေါ်လာတဲ့ system properties က Advanced ကို click ပါတယ်။ Performance က Settings ကို click ပါတယ်။
Performance Options မှ Advanced ကိုရွေးပြီး Programs နှစ်ခုကို check ပေး Virtual memory က Change ကို click ပါတယ် ။
အောက်ပါအတိုင်း Virtual memory ပေါ်လာပါမယ်။ Initial size နဲ့ Maximum size က တန်ဖိုးနှစ်ခုကို ရေးမှတ်ထားလိုက်ပါ ။ တစ်ခုခု အဆင်မပြေတာ ရှိခဲ့ ရင် Default လုပ်နိုင်အောင်ပါ။
Virtual Memory ဆိုသည်မှာ RAM က Hard disk memory ကို ငှားသုံး ခြင်းဖြစ်ပါတယ် ။ (ဥပမာ - Default Initial size = 1500 Mb(nearly 1.5Gb) , Hard Disk free space =5Gb ရှိတယ် ဆိုကြပါစို့ Initial size ကို 2000 Mb ( 2Gb ) တင်လိုက်ပါက Hard disk free space သည် 4.5 Gb ဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ် ။ ( မည်သို့ပင် memory transfer လုပ်နိုင်သည် ဖြစ်စေ System Memory က ပဲ တစ်ကယ် လုပ်ဆောင်ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ) ကျနော့်မှာ Initial 1500 ရှိပြီးသား ဖြစ်လို့ 2000 လို့ပေးပြီး၊ Maximum ကို 3500 ပေးလိုက်ပါတယ် ။ ပြီးရင် Set ကို နိုပ်ပါတယ် ။
ပြီးရင်တော့ OK ပေါ့ ။ Restart တောင်းလာပါလိမ့်မယ် ။ window ပြန်တက်လာ ရင်တော့ ခင်ဗျားစက် အရင်ထက်ပိုမြန် နေတာ တွေ့ရပါလိမ့်မယ် ။ CPU ရဲ့လုပ်ဆောင်နိုင်ရည်ကို ကြည့်ပြီး တင်သင့်ပါတယ်။ Memory များရင် စက်မြန်တယ် ဆိုပြီး memory အများကြီး စိုက်ပြီး CPU မလိုက်နိုင်လို့ ပိုလေး သွားတဲ့ စက်တွေ တွေ့ဘူးပါတယ်။
Posted by SLIP at 7:27 AM 1 comments
Posted by SLIP at 12:11 PM0comments
C++ (U Aung Myint)
C++ 2(U Aung Myint)
Posted by SLIP at 11:35 AM0comments